ျမန္မာ့ဝိဇၨာဓရေလာက၌ လြန္စြာနာမည္ႀကီးလွေသာ အ့ံဖြယ္အေဆာင္ ပိတုန္းအေၾကာင္ – Barnyar Barnyar
ပိေတာက္သားျဖင့္လုပ္ထားေသာလွည္းပေဒါင္းသားကိုဖင္ေဖာက္ၿပီးျပဒါး ထည့္ ပဒိုင္းသားနဲ႔ ပိတ္ကာ ေလာကီအစီအရင္ပညာမ်ားအတိူင္း အသက္သြင္းသိဒၶိတင္အေစာင့္သြင္းကာ စီရင္ၾကကုန္၏။
စီရင္နည္း မွာ ပိေတာက္ပေဒါင္းျပဒါးပဒိုင္းကက္ကင္းဓာတ္မ်ားဆင့္ကာ မႏၲန္စုတ္ တာမ်ားအထိ တူညီ ၾကေသာ္လည္း စုတ္ရမည့္မႏၲန္ မ်ား စီရင္သည့္အယူအဆ မ်ားမွာၾဆာတဦးနဲ႔ တဦး ေတ့လြဲ ေလးေတြ လြဲ ကာ မူေတြကြဲ သြားၾက၏။
က်မ္းဂန္လာ အာစရိယဝါဒမ်ား အတိုင္းတိတိက်က် စီရင္ရပါမူတႏွစ္မွတခါ တလ မွာ ၾကာသာပေတးႏွင့္ စေနရက္ ၂ ရက္၌သာ စီရင္ရတာမို ့မလြယ္ေရးခ် မလြယ္ပါ။
မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ မည္သိူ႔ပင္ မူေတြ ကြဲ ပါေစအဓိက မိမိစိီရင္သည့္ ပိတုန္း သည္ အမွန္တကယ္ အသက္ဝင္ဖို႔က အဓိကက်၏ မဟုတ္ေလာ။ အသက္ရွိ ေသာ ပိတုန္း သိဒၶိေျမာက္ေသာပိတုန္း မွသာအတိုက္အခိုက္ ကိစၥေတြ မွာ စိတ္ခ်ရမည္မဟုတ္ပါေလာ။ စီီရင္သည့္ ပိတုန္း ေကာင္သည္ တကယ္အသက္ဝင္ကစုန္းဖုတ္တေစၦ မိစာၦမ်ားတင္မကဂုးံေခ်ာဂုံးတိုက္မလိုတမာမိမိအားရန္ျပဳတိုက္ခိုက္ၾကေသာသူမ်ား ကိုပင္လွ်င္ အလိုလိုတန္ျပန္ ေသာ သတၱိထူးရွိ ေပရာ။ အတိဒုကၡ ေရာက္ေနေသာရရက္သားသမီးမ်ားအတြက္အမွန္အဖိုးအနဂၣ ထိုက္တန္ေသာ အေဆာင္ပညာတခုျဖစ္၏။ အသက္ဝင္ေအာင္ သြင္း တတ္ဖို႔က ဤ ပညာ၏ ဝွက္ဖဲ တခ်ပ္ျဖစ္၏။
ကြၽန္ုပ္သည္ၾဆာသခင္၏ ခိုင္းေစခ်က္အရ ငါ့သားေရဝိဇၨာယာနပညာမွာ နာမည္ႀကီးလွတဲ့ေ႐ႊတိဂုံအေရွ႕ဘက္မုဒ္ရွိဝိဇၨာယာနအစိီအရင္ပိတုန္းပဒိုင္းဘုရားရွိပိဒိုင္းအဖိုအမ၂ေကာင္၏ေမတၱာကိုရေအာင္အရယူထားကြယ့္ဟူေသာမိန႔္မွာခ်က္အတိုင္းလြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ခန႔္ကေမတၱာသုတ္ျဖင့္အထူးရက္ရွည္အဓိဌာန္ဝင္ခဲ့ ရဖူး၏။
ထိုအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ကြၽန္ုပ္ေဆးကုရာ၌ပိတုန္းအေဆာင္မ်ားစီရင္ရာ၌ လည္ေကာင္း။ အေရးႀကဳံက အကူညိီလိုကအဖပိတုန္းနဲ႔အေမပိတုန္းမယ္ေတာ္ႀကီးေရ ဟူ၍ တ လိုက္႐ုံ မွ် ျဖင့္ထူးကဲစြာျဖင့္ လာေရာက္ကူညီၾကေသာ အျဖစ္ပ်က္မ်ားစြာမွာေျပာမယုံ ႀကဳံ ဖူးမွ သိ ဟူေသာစကားကဲ့ သို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ မေရမတြက္ႏိုု္င္ခဲ့ ရေပ။
တေၾကာင္းတဂါတာ တ႐ြာ တပုဒ္ဆန္းသူ ့မူသူ ့နည္းစနစ္အားေလ်ာ္စြာ ဂမၻီရလမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ ၾဆာအမ်ိဳးမ်ိဳးစီရင္ေနၾကေသာ္လည္း
အခ်ိဳ႕က ပိတုန္းေဆာင္လွ်င္ = လာဘ္ပိတ္တတ္၏။
အခ်ိဳက ေငြမၿမဲ ။ အခ်ိဳ႕က တိုက္ပိတုန္းမို႔ေအာက္လမ္းဆန္၏။
(သူ ့မူ ႏွင့္သူ ) အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာၾကေသာ္လည္း ကြၽန္ု္ပ္၏မူ မွာမူ မိမိဘက္ကသာမွန္ကန္ေလေလ ျပင္းထန္စြာအစြမ္းျပေလေလျဖစ္၏။ အထက္လမ္းအေဆာင္ ျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ မိမိဘက္ကသာမွန္ပေစ မိစာၦပညာမ်ား၌ တင္မက ဂုံးခ်ာဂုံးတိုက္မလိုတမာအတိုက္အခံ ျပဳေနသူမ်ားအားပင္လွ်င္ ဂြၽန္းျပန္ေအာင္တုန္ျ့ပန္ တတ္ေပရာ။ စိန္ေခၚလွ်င္ တိမ္အေပၚထိ လိုက္မည့္ ပိတုန္း ဟူ၍ ျမန္မာ့ဝိဇၨာဓရ ေလာက၌ ေခတ္အဆက္ဆက္ေက်ာ္ၾကား ခဲ့ ေပ၏။
ထက္ျမက္စြာအစိီအရင္ျပဳထားေသာပိတုန္းပဒိုင္းတေကာင္ကိုယ္အေပါက္ေဖာက္ႀကိဳးတပ္ကာလည္ပင္းဆြဲ. နယ္လွည့္လက္ေဝွ႔ထိုးစားကာ အထိအခိုက္နည္း၍နာမည္ေက်ာ္ၾကားလွေသာလက္ေဝွ႔သမားမ်ားအေၾကာင္း လည္း ျမန္မာ့ရာဇဝင္၌ အထင္အရွားရွိခဲ့ဖူး၏။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစပေယာဂအတိုက္အခိုက္မ်ားတင္မကလွည့္ၾကည့္စရာမလို ဒဏ္ျပန္အားေကာင္းလွၿပီး လူမိစာၦမ်ား၏ရန္ျပဳ ျခင္းမ်ားကိုပင္ သီးမခံ ျပင္းျပင္းထန္ထန္လက္တုန႔္ျပန္တတ္ေသာ
ကိုယ္လုံကိုယ္ခံပိတုန္းတိုက္ခိုက္ေရးပိတုန္းသူခိုးရန္သူလုံအိမ္ေစာင့္ပိတုန္းလူမိစာၦ မလိုတမာ မေကာင္းႀကံသူမ်ားအထိဆတ္ဆတ္ထိမခံ လက္တုန႔္ျပန္ တတ္ေသာ ျမန္မာ့ဝိဇၨာဓရပညာေလာက၌လူႀကိဳက္မ်ားလွေသာ ပိတုန္း အစိီအရင္ ပိတုန္းေကာင္ေလးမ်ားသည္ မည္သည့္အခါ မွ် တိမ္ေကာလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ပိတုန္း အေၾကာင္းတေမးတည္းေမးေနၾကေသာ က်ေနာ့္ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ဤေဆာင္းပါးျဖင့္အေျဖေပးေရးသားရင္း – ၾဆာစိုင္း
ပန္းေတာင္း ၿမိဳ႕မွရွိတဲ့ဝန္အျပည့္နဲ႔႐ုန္းေနခ်ိန္က်ိဳးတဲ့လွည္းပေဒါင္း အက်ိဳးႏွင့္ ပိတုန္း႐ုပ္ ထုၿပီး ဖင္တြင္ အေပါက္ေဖါက္ၿပီး ျပဒါးထည့္ ပဒိုင္းသားႏွင့္ ပိတ္ ၿပီး ပဒံဘုရားတြင္ ပိတ္ျဖဴခင္းရမည္။ ပိတ္ျဖဴအေပၚမွာ စံပါယ္ပန္းေလးေတြတင္ၿပီး ပဌာန္း ၁၀၈ ေခါက္ ေမတၱာသုတ္ ၁၀၈ ေခါက္ ၿပီးလွ်င္ အာဆိပ္ထည့္ ဂါထာ ၁၀၈ ႐ြတ္ၿပီး အသက္သြင္းၾကပါတယ္။ ပိတုန္းကို ေ႐ႊေဆးေလး ခ်ထားၿပီး ပိတ္ျဖဴႏွင့္ ထုတ္ထားရပါတယ္။ ခရီးသြားခ်ိန္ အိမ္ထုပ္တန္းမွာ ပိတ္ျဖဴထဲ စံပါယ္ပန္းထည့္ၿပီး ခ်ည္ထားခဲ့လွ်င္ စိတ္ခ်ရပါတယ္။ သူခိုးမ်ား လာခိုးလွ်င္ အိမ္ေပ်ာက္ေနပါတယ္။
( မွတ္ခ်က္ ) ပဒံဘုရားသည္ လႈိင္သာယာ ပဒံဘက္တြက္ရွိပါသည္။
✍️”ပိတုန္း႐ုပ္အေဆာင္ႏွင့္ပိတုန္း ပုတီး အစီအရင္”✍️
?”ပိတုန္း႐ုပ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ”?
ဤသို႔ သိဒၶိဝင္ ပိတုန္း မ်ိဴး ရရွိလာမွသာ လိုရာ ကိုလိုအပ္သလို ခိုင္းေစႏိုင္ပါမည္ ။
၁။ လွည္းပေတာင္း … မွန္ကန္ ခဲ့ပါလွ်င္ သိဒၶိ စြမ္းအား ၂၅%
၂။ ပိေတာက္သား … မွန္ကန္ ခဲ့ပါလွ်င္ သိဒၶိ စြမ္းအား ၂၅%
၃။ ပိတုန္း႐ုပ္ …….. မွန္ကန္ ခဲ့ပါလွ်င္ သိဒၶိ စြမ္းအား ၂၅%
၄။ ျပဒါးထည့္ … မွန္ကန္ ခဲ့ပါလွ်င္ သိဒၶိ စြမ္းအား ၂၅%
စု႔စု႔ေပါင္း ပိတုန္း႐ုပ္ တစ္ေကာင္ ၏ အာနိသင္ သိဒၶိ စြမ္းအား သည္ ၁၀၀% ရွိရပါမည္ ။ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ တစ္ခ်က္ ေလ်ာ့ ပါက ထင္သေလာက္ မစြမ္း ႏိုင္ပါ ။ မိမိ ေဆာင္ထား ေသာ ပိတုန္း႐ုပ္ သည္ မည္သည့္သိဒၶိ မွမရွိ ..
ထုလုပ္ ေဆာင္႐ြက္ပုံ မွာ … လွည္းပေတာင္း ပိေတာက္ သား ကို ပိတုန္း ႐ုပ္ထု ပိတုန္းဖင္ ကို အေပါက္ေဖာက္ အေပါက္ ထဲ ျပဒါး ထည့္ ပါ။ ပဒ္ိုင္း အျမစ္ ႏွင့္ အေပါက္ ကို ျပန္ပိတ္ပါ ။ ၿပီး လွ်င္ ေဆးကတၱရာ အနက္ သုတ္ပါ ။( ေ႐ႊမခ်ရပါ ) ထု႔ လုပ္ရမည့္ ေန႔ မွာ … တနဂၤေႏြ .. အဂၤါ .. စေန .. ထို သုံးေန႔ တြင္ ေဆာင္႐ြက္ စီမံရပါ မည္ ။ နကၡတ္ အခ်ိန္ အခါ မမွန္ပါက ထင္သေလာက္မစြမ္း ႏိုင္ပါ ။ ပိတုန္း ႐ုပ္ ထု႔ လုပ္ ရာ အခ်ိန္ သည္ ႏွစ္ဘက္ကဏ္း ခါးပါဒ္ နကၡတ္ ဝရစုပ္ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ရန္ အလြန္ အေရး ႀကီးသည္။
ဤသို႔ … ပိတုန္း ႐ုပ္ မ်ား ထုလုပ္ ၿပီး ေနာက္ရဟႏၲာ သမုပ္ ခဲ့ေသာ သိမ္ တစ္ခု႔ တြင္ သိမ္ ထဲရွိ ဘုရား ေရွ႕ တြင္
ဆြမ္း (၅) ပြဲ
လက္ဖတ္ (၅) ပြဲ
ယို (၅) မ်ိဴး
ဘူးသီးေၾကာ္ ဘယာေၾကာ္ ပဲေၾကာ္ ၾကက္သြန္ေၾကာ္ အာလူးေၾကာ္ အေၾကာ္ (၅) မ်ိဴး (၃) ခုစီ ထည့္ ပါ ။
စံပါယ္ပန္း (၈) ပြင့္ ႏွင္းဆီပန္း (၈) ပြင့္ ႏွင္းပန္း (၈) ခက္ ထီးျဖဴ (၃) လက္ တံခြန္ (၃)လက္ ဖေယာင္းတိုင္ (၈) တိုင္ ထြန္းဘုရား ကို ကပ္လႈ ပူေဇာ္ ၍ လိုအပ္ေသာဆုေတာင္း ရပါမည္ ။
ၿပီးလွ်င္ ေအာက္ပါ ဂါထာ မ်ား ႏွင့္ သိဒၶိ တင္အသက္သြင္း ရပါမည္ ။
၁။ ၪုမ္ ဣတိပိအရဟံ အဝိညာဏကၾသသထံသဝိညာဏကံ သမံ အ့ံ အံ့(၁၈) ေခါက္ ႐ြတ္၍အသက္သြင္းရမည္။
၂။ ၪုမ္ ဗုဒၶံ သိဒၶိ ဓမၼံသိဒၶိ သံဃံသိဒၶိ မာတာပိတုသိဒၶိ အာစရိယာသိဒၶိ ျဗဟၼသိဒၶိ ေဒဝသိဒၶိ ဝိဇၨာဓရသိဒၶိ ယကၡသိဒၶိ သိဒၶိ အေပါင္း ေထာင္ေသာင္း တည္ပါေစသတည္း ထက္ပါေစသည္း ေအာင္ပါေစသတည္း။(၁၈) ေခါက္ ႐ြတ္ဖတ္ ၍ သိဒၶိ တင္ပါ ။
ဒကာမႀကီး …. ” တန္ခိုးႀကီးေသာ ဆရာေတာ္သိဒၶိႀကီးေသာဆရာေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္အႏွံ႔ေက်ာ္ၾကားေန၍ဆရာေတာ္ထံအားကိုးတႀကီးေရာက္လာၾကတာပါ ဘုရား ”
တပည့္ေတာ္မ တို႔ဟာ မရွိဆင္းရဲ တဲ့ ဘဝကေနတက္လာတာပါ ဘုရား လူဆိုးသူခိုးေတြကဆိတ္ေတြ႕ရင္ဆိတ္ခိုးႏြားေတြ႕ႏြားခိုးနဲ႔တပည့္ေတာ္တို႔လဲ ညေရး ညတာအျပင္ဘက္ မလိုက္ရဲ ေတာ့ သူတို႔ အႀကိဳက္ ျဖစ္ေနတာ ဘုရား ။ဒါမို႔ အိမ္ အား သူခိုး အခိုး မခံရေလေအာင္ ..
ဆရာေတာ္ ….”ေအး ..ေအး ..ဒါဆိုရင္ပိတုန္း႐ုပ္ထုထုဟပိတုန္း႐ုပ္ေတြကို အိမ္ အလည္ဗဟို မွာအိမ္တိုင္ ထဲ တစိေကာင္ထည့္ အိမ္ ေလးတိုင္မွာ လြန္နဲ႔ ေဖာက္ အေပါက္ထဲပိတုန္း႐ုပ္ ျပန္ထည့္ ပိတ္.. ငါ ကိုယ္တိုင္ ဂါထာ စုပ္ ၿပီးအမိန႔္ ျပန္ေပး မယ္ .. နင္တို႔ကသာ ငါ ၫႊန္ျပသလိုပိတုန္း ႐ုပ္ ေတြ ကိုသာ ခပ္မ်ားမ်ား ရေအာင္ သြား
ထု ၾက ” ထိုသို႔ အမိန႔္ေပး ၿပီး ခ်က္ခ်င္းပင္ ေန႔ေကာင္းရက္
ျမတ္ေ႐ြး ၍ ပိတုန္း႐ုပ္ စီစဥ္ရေလ၏ ။
ပိတုန္း ႐ုပ္ မ်ား ထဲ ျပဒါး ထည့္ ပဒိုင္း ျမစ္ႏွင့္ ဆို႔ပိတ္ၿပီး ေဆးကတၱရာ အမဲ သုတ္ေနလွန္းေဆး သုတ္ထား ရာ ေျခာက္သြား မွ ပိတုန္း႐ုပ္
အား အသက္သြင္း သိဒၶိတင္ ၍ ပိတုန္းအႏႈိးအေစဂါထာ ထပ္စုပ္ မနိး ၍ လိုရာ ကို အမိန႔္ေပးၿပီးအိမ္တိုင္ ႀကီးထဲတြင္ အေပါက္ေဖာက္ ပိတုန္း႐ုပ္မ်ား ကိုထည့္ ၍ အေသ ပိတ္လိုကိပါေတာ့၏။
ၿခံ ေလးေထာင့္ တြင္ လည္း ပိတုန္း တစ္ေကာင္စီထည့္ ၍ အမိန႔္ ျပန္ခဲ့ေလသည္။ပိတုန္း႐ုပ္ ျမဳပ္ၿပီး .. ေနာင္ လ အနဲငယ္ ၾကာေသာ္
ထို မိသားစု႔ သည္ ဝမ္းသာအားရ ျဖင့္ လာေရာက္ကန္ေတာ့ ၾကေလသည္ ။
ဒကာမမ်ား …. ” … သူခိုးေတြ လာၿပီး ဝန္ခ် ေတာင္း ပန္ သြားပါတယ္ ဘုရား .. ပိတုန္း ျမဳပ္ေပးပီးလ အနဲငယ္ ၾကာ မွာ သူတို႔ လာခိုး တဲ့ အခါ သူတို႔ဟာ အိမ္ ကို လဲ ရွာမေတြ႕ၿခံလဲ ရွာမေတြ႕ပါဘုရား .. ဒီလိုနဲ႔ မိုးလင္းသြားတဲ့အခါျပန္ေျပးရေတာ့တာေပ့ါဘုရား …သူခိုးေတြဟာဘယ္
ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ လာၿပီး ခိုးတာေတာ့ မသိပါဘုရား .. ခိုးဖို႔ လာလိုက္ မေတြ႕လိုက္နဲ႔ ေနာက္ဆုံးမွာ ဝန္ခ် ေတာင္းပန္သြားတာပါ ဘုရား ..”
“.. အေဒၚ တို႔အိမ္ မွ ကြၽဲ ႏြား ပစၥည္း ေတြ ခိုးယူေနတာ က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႕ ပါ .. ဒီအတြက္ …က်ေနာ္တို႔ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ပါတယ္ … ေနာင္ ေနာင္ ကိုလဲအေဒၚ တို႔ အိမ္က ပစၥည္း ေတြ မခိုး ေတာ့ပါ ဘူး။
လို႔ သစၥာ လဲ ျပဳ႕ပါတယ္ .. ကတိ လည္း ေပးပါတယ္ … ခိုးယူမိတဲ့ အမွား အတြက္ လည္း ေနာင္တရလို႔ မဆုံး ပါ ဘူး ..
ဘာ ေၾကာင့္ ဆို ေတာ့ .. အေဒၚ တို႔ အိမ္ မွာဘာအေဆာင္ ရွိသလဲ ..?
ဘာေတြလုပ္ထားလဲေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မေျပာတက္ပါ ဘူး .. အေဒၚ တို႔ အိမ္ က်ေနာ္တို႔ ခိုး ဖို႔ လာတာ၃ ခါ ေလာက္ ရွိပါၿပီ ။ ဒါေပမဲ့ .. ထူးဆန္းတာကေန႔ ခင္း ပိုင္း က အိမိ ကို ဘယ္လ္ုိ မွတ္ထားပါေစ
ခိုး ဖို႔ လာရင္ လမ္းမွား အိမ္မွား အိမ္ကို ရွာလို႔မေတြ႕ပဲ အိမ္ ရွာရင္း မိုး လင္း သြားတာနဲ႔ျပန္ေျပး ရေတာ့တာပဲ လို႔ . ေျပာသြား ပါတယ္
ဤ ကား ဆရာေတာ္ ႀကီး အစီအရင္ ျဖစ္ေသာပိတုန္း ႐ုပ္၏ကိုယ္ေတြ႕ အား ဆရာေတာ္ မွေရး သား တင္ျပ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ေပသည္ ။
ဆရာေတာ္၏ ပိတုန္း႐ုပ္ အစီရင္အား ျမဳပ္ႏွံအေဆာင္ အျဖစ္ေဆာင္ၿပီး ေနာက္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားစြာ ဆရာေတာ္ တင္ျပ ခဲ့သည္ မ်ား ကိုအလ်ဥ္း သင့္သလို ေရးသား ေဖာ္ ျပ ေပးသြားပါဦးမည္ ။
ပိတောက်သားဖြင့်လုပ်ထားသောလှည်းပဒေါင်းသားကိုဖင်ဖောက်ပြီးပြဒါး ထည့် ပဒိုင်းသားနဲ့ ပိတ်ကာ လောကီအစီအရင်ပညာများအတိူင်း အသက်သွင်းသိဒ္ဓိတင်အစောင့်သွင်းကာ စီရင်ကြကုန်၏။
စီရင်နည်း မှာ ပိတောက်ပဒေါင်းပြဒါးပဒိုင်းကက်ကင်းဓာတ်များဆင့်ကာ မန္တန်စုတ် တာများအထိ တူညီ ကြသော်လည်း စုတ်ရမည့်မန္တန် များ စီရင်သည့်အယူအဆ များမှာဆြာတဦးနဲ့ တဦး တေ့လွဲ လေးတွေ လွဲ ကာ မူတွေကွဲ သွားကြ၏။
ကျမ်းဂန်လာ အာစရိယဝါဒများ အတိုင်းတိတိကျကျ စီရင်ရပါမူတနှစ်မှတခါ တလ မှာ ကြာသာပတေးနှင့် စနေရက် ၂ ရက်၌သာ စီရင်ရတာမို့မလွယ်ရေးချ မလွယ်ပါ။
မည်သို့ပင် ဆိုစေ မည်သိူ့ပင် မူတွေ ကွဲ ပါစေအဓိက မိမိစီရင်သည့် ပိတုန်း သည် အမှန်တကယ် အသက်ဝင်ဖို့က အဓိကကျ၏ မဟုတ်လော။ အသက်ရှိ သော ပိတုန်း သိဒ္ဓိမြောက်သောပိတုန်း မှသာအတိုက်အခိုက် ကိစ္စတွေ မှာ စိတ်ချရမည်မဟုတ်ပါလော။ စီရင်သည့် ပိတုန်း ကောင်သည် တကယ်အသက်ဝင်ကစုန်းဖုတ်တစ္ဆေ မိစ္ဆာများတင်မကဂုးံချောဂုံးတိုက်မလိုတမာမိမိအားရန်ပြုတိုက်ခိုက်ကြသောသူများ ကိုပင်လျှင် အလိုလိုတန်ပြန် သော သတ္တိထူးရှိ ပေရာ။ အတိဒုက္ခ ရောက်နေသောရရက်သားသမီးများအတွက်အမှန်အဖိုးအနဂ္ဃ ထိုက်တန်သော အဆောင်ပညာတခုဖြစ်၏။ အသက်ဝင်အောင် သွင်း တတ်ဖို့က ဤ ပညာ၏ ဝှက်ဖဲ တချပ်ဖြစ်၏။
ကျွန်ုပ်သည်ဆြာသခင်၏ ခိုင်းစေချက်အရ ငါ့သားရေဝိဇ္ဇာယာနပညာမှာ နာမည်ကြီးလှတဲ့ရွှေတိဂုံအရှေ့ဘက်မုဒ်ရှိဝိဇ္ဇာယာနအစီအရင်ပိတုန်းပဒိုင်းဘုရားရှိပိဒိုင်းအဖိုအမ၂ကောင်၏မေတ္တာကိုရအောင်အရယူထားကွယ့်ဟူသောမိန့်မှာချက်အတိုင်းလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခန့်ကမေတ္တာသုတ်ဖြင့်အထူးရက်ရှည်အဓိဌာန်ဝင်ခဲ့ ရဖူး၏။
ထိုအကျိုးဆက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဆေးကုရာ၌ပိတုန်းအဆောင်များစီရင်ရာ၌ လည်ကောင်း။ အရေးကြုံက အကူညီလိုကအဖပိတုန်းနဲ့အမေပိတုန်းမယ်တော်ကြီးရေ ဟူ၍ တ လိုက်ရုံ မျှ ဖြင့်ထူးကဲစွာဖြင့် လာရောက်ကူညီကြသော အဖြစ်ပျက်များစွာမှာပြောမယုံ ကြုံ ဖူးမှ သိ ဟူသောစကားကဲ့ သို့ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ မရေမတွက်နိုင်ခဲ့ ရပေ။
တကြောင်းတဂါတာ တရွာ တပုဒ်ဆန်းသူ့မူသူ့နည်းစနစ်အားလျော်စွာ ဂမ္ဘီရလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ ဆြာအမျိုးမျိုးစီရင်နေကြသော်လည်း
အချို့က ပိတုန်းဆောင်လျှင် = လာဘ်ပိတ်တတ်၏။
အချိုက ငွေမမြဲ ။ အချို့က တိုက်ပိတုန်းမို့အောက်လမ်းဆန်၏။
(သူ့မူ နှင့်သူ ) အမျိုးမျိုးပြောကြသော်လည်း ကျွန်ု်ပ်၏မူ မှာမူ မိမိဘက်ကသာမှန်ကန်လေလေ ပြင်းထန်စွာအစွမ်းပြလေလေဖြစ်၏။ အထက်လမ်းအဆောင် ဖြစ်သည့်အားလျှော်စွာ မိမိဘက်ကသာမှန်ပစေ မိစ္ဆာပညာများ၌ တင်မက ဂုံးချာဂုံးတိုက်မလိုတမာအတိုက်အခံ ပြုနေသူများအားပင်လျှင် ဂျွန်းပြန်အောင်တုန်ြ့ပန် တတ်ပေရာ။ စိန်ခေါ်လျှင် တိမ်အပေါ်ထိ လိုက်မည့် ပိတုန်း ဟူ၍ မြန်မာ့ဝိဇ္ဇာဓရ လောက၌ ခေတ်အဆက်ဆက်ကျော်ကြား ခဲ့ ပေ၏။
ထက်မြက်စွာအစီအရင်ပြုထားသောပိတုန်းပဒိုင်းတကောင်ကိုယ်အပေါက်ဖောက်ကြိုးတပ်ကာလည်ပင်းဆွဲ. နယ်လှည့်လက်ဝှေ့ထိုးစားကာ အထိအခိုက်နည်း၍နာမည်ကျော်ကြားလှသောလက်ဝှေ့သမားများအကြောင်း လည်း မြန်မာ့ရာဇဝင်၌ အထင်အရှားရှိခဲ့ဖူး၏။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေပယောဂအတိုက်အခိုက်များတင်မကလှည့်ကြည့်စရာမလို ဒဏ်ပြန်အားကောင်းလှပြီး လူမိစ္ဆာများ၏ရန်ပြု ခြင်းများကိုပင် သီးမခံ ပြင်းပြင်းထန်ထန်လက်တုန့်ပြန်တတ်သော
ကိုယ်လုံကိုယ်ခံပိတုန်းတိုက်ခိုက်ရေးပိတုန်းသူခိုးရန်သူလုံအိမ်စောင့်ပိတုန်းလူမိစ္ဆာ မလိုတမာ မကောင်းကြံသူများအထိဆတ်ဆတ်ထိမခံ လက်တုန့်ပြန် တတ်သော မြန်မာ့ဝိဇ္ဇာဓရပညာလောက၌လူကြိုက်များလှသော ပိတုန်း အစီအရင် ပိတုန်းကောင်လေးများသည် မည်သည့်အခါ မျှ တိမ်ကောလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပိတုန်း အကြောင်းတမေးတည်းမေးနေကြသော ကျနော့်ပရိတ်သတ်များအတွက်ဤဆောင်းပါးဖြင့်အဖြေပေးရေးသားရင်း – ဆြာစိုင်း
ပန်းတောင်း မြို့မှရှိတဲ့ဝန်အပြည့်နဲ့ရုန်းနေချိန်ကျိုးတဲ့လှည်းပဒေါင်း အကျိုးနှင့် ပိတုန်းရုပ် ထုပြီး ဖင်တွင် အပေါက်ဖေါက်ပြီး ပြဒါးထည့် ပဒိုင်းသားနှင့် ပိတ် ပြီး ပဒံဘုရားတွင် ပိတ်ဖြူခင်းရမည်။ ပိတ်ဖြူအပေါ်မှာ စံပါယ်ပန်းလေးတွေတင်ပြီး ပဌာန်း ၁၀၈ ခေါက် မေတ္တာသုတ် ၁၀၈ ခေါက် ပြီးလျှင် အာဆိပ်ထည့် ဂါထာ ၁၀၈ ရွတ်ပြီး အသက်သွင်းကြပါတယ်။ ပိတုန်းကို ရွှေဆေးလေး ချထားပြီး ပိတ်ဖြူနှင့် ထုတ်ထားရပါတယ်။ ခရီးသွားချိန် အိမ်ထုပ်တန်းမှာ ပိတ်ဖြူထဲ စံပါယ်ပန်းထည့်ပြီး ချည်ထားခဲ့လျှင် စိတ်ချရပါတယ်။ သူခိုးများ လာခိုးလျှင် အိမ်ပျောက်နေပါတယ်။
( မှတ်ချက် ) ပဒံဘုရားသည် လှိုင်သာယာ ပဒံဘက်တွက်ရှိပါသည်။
✍️”ပိတုန်းရုပ်အဆောင်နှင့်ပိတုန်း ပုတီး အစီအရင်”✍️
ပိတုန်းရုပ်လောကီအစီရင်သည်ရှေးမြန်မာလူမျိုးတို့၏ကိုယ်ပိုင်လောကီပညာစစ်ဖြစ်သည်။ မတလုံးကြေဆရာတော်ခင်ကြီးဖျော်မှစတင်စီမံခဲ့သည်ဟူ၍၎င်းထိုထက်ရှေးကျသောပုဂံခေတ်သံသပိတ်ကြီးလက်ထက်မှစတင်၍စီရင်ခဲ့သည်ဟူ၍လည်းကောင်းတိတိကျကျမသိရသော်လည်းမြန်မာ့လောကီပညာစစ်စစ်ဟူသည်ကားသေချာလှပါသည်။ ပိတုန်းရုပ်အဆောင်အစီရင်ကိုခေတ်အဆက်ဆက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အထက်ပညာသည်များကအထက်အစီရင်ဖြင့်၎င်းခုလတ်ပညာသည်များက ခုလတ်ပညာဖြင့်လည်းကောင်း အောက်ပညာရှင်များက အောက်အစီရင်ဖြင့်လည်းကောင်း ရှမ်းလောကီပညာ ကရင်လောကီပညာတို့တွင်လည်း ပိတုန်းအဆောင်အစီရင်သည်မပါမပြီးသောအစီရင်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်ကို ထောက်၍ ပိတုန်းအစီရင်သည်အကျိုးပေးထင်ရှားကြောင်း သိမြင်နိုင်ပါသည်။ စီရင်မူအပေါ်မူတည်၍ တိုက်ပိတုန်း ပီယပိတုန်း စသည်ဖြင့် စီရင်ပုံကွဲလာသလို ပိတုန်းအရောင်မှာလဲ ရွှေပိတုန်း ငွေပိတုန်း မူလပိတုန်းရောင်စသည်ဖြင့်လဲ အသုံးပြုလာကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ လောကီပညာသည်သဘာဝမှလာသောပညာသာဖြစိ၍သဘာဝနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖို့အရေးကြီးပါသည်။
တချို့ကလဲ ဓမ္မာ အတွင်းရန်မိနေ၍ အတိုက်များကြောင်း ရန်ဓာတ်များကြောင်း အစွမ်းကြီး၍ သတိထားစီရင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့်ထောက်ပြပြောဆိုကြပါသည်။ ပိတုန်းအစီရင်သည်အစွမ်းကြီးသလောက်ရန်ဓာတ်မိနေသည်မှာလဲအမှန်ဖြစ်ပါသည်။ထိုအတွက်လဲရန်ဓာတ်ကိုဖြေရန်ဖြေနည်းသိဖို့လိုပါသည်။ ဖြေနည်းသိပါက မည်သည့်နေ့သားမဆို ဆောင်နိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်သောကြာသားများ အထူးဆောင်သင့်ပါသည်။ ပိတုန်းအစီအရင်နှင့်တွဲ၍လည်းပိတောက်သားပုတီးတွင်ပိတုန်းရုပ်စီရင်၍လည်း အသုံးပြုကြပါသည်။ ပိတုန်းရုပ်၏အစွမ်းကိုယူ၍ပုတီးစီရင်ပါကလဲပိတုန်းရုပ်သည်ပိတုန်းနှင့်တူရပါမည်ပိတုန်းသည်ပိတုန်းရုပ်နှင့်မတူပါကအစွမ်းထကိမြတ်မည်မဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပိတောက် ပိတုန်း ပုတီးဟုခါ်သော်လည်း ပုတီးကိုပိတောက်သားဖြင့်စီရင်ပြီး ပိတုန်း ရုပ်တွင်သာ လှည်းပဒေါင်း ပိတောက်သား ကို လိုသောနက္ခတိမိချိန်တွင် ပီပီသသထု ပြဒါးသွင်း ပဒိုင်းစေ့နှင့်ပိတ်၍ ပိတုန်းရုပ်ကို သေချာစီရင်ထားခြင်းဖြစ်၍ ပိတုန်းရုပ်ပီပြင်ဖို့လိုပါသည်။
?”ပိတုန်းရုပ် အကြောင်း သိကောင်းစရာ”?
လှည်းပတောင်း ဖြစ်ရပါမည် ။ပိတောက်သား ဖြစ်ရပါမည် ။ ပန်းတောင်းမြို့ကလှည်းပတောင်းပိတောက်သားကိုပိတုန်းရုပ်ထုထုပါမည် ။ ပိတုန်း ရုပ်သည် အတောင်ပံ ဖြန့်နေသောပုံ ဖြစ်ရမည် ဖြစ်ပြီး ပါးစပ် နှုတ်သီး ဟထားရပါမည်။ ရန်သူ အား တုပ်တော့ ကိုက်တော့မည့်ဟန် ထုရပါမည် ။ပိတုန်းရုပ် သည် မာန်ပါပါ နှင့် ဒေါသဟန် ဖြင့်ရန်သူများ ကို တိုက်ခိုက်တော့မည့်ပုံ ထုရမည်။ သို့မှသာ … အစွမ်းထက် သော သိဒ္ဓိတန်ခိုး နှင့်ပြည့်စုံသော သိဒ္ဓိဝင် ပိတုန်း တစ်ကောင်ကိုဆောင်ရွက် စီရင်နိုင်ပေမည် ။
ဤသို့ သိဒ္ဓိဝင် ပိတုန်း မျိူး ရရှိလာမှသာ လိုရာ ကိုလိုအပ်သလို ခိုင်းစေနိုင်ပါမည် ။
ပိတုန်းရုပ် ၏ အာနိသင် စွမ်းအား ကို …
၁။ လှည်းပတောင်း … မှန်ကန် ခဲ့ပါလျှင် သိဒ္ဓိ စွမ်းအား ၂၅%
၂။ ပိတောက်သား … မှန်ကန် ခဲ့ပါလျှင် သိဒ္ဓိ စွမ်းအား ၂၅%
၃။ ပိတုန်းရုပ် …….. မှန်ကန် ခဲ့ပါလျှင် သိဒ္ဓိ စွမ်းအား ၂၅%
၄။ ပြဒါးထည့် … မှန်ကန် ခဲ့ပါလျှင် သိဒ္ဓိ စွမ်းအား ၂၅%
စု့စု့ပေါင်း ပိတုန်းရုပ် တစ်ကောင် ၏ အာနိသင် သိဒ္ဓိ စွမ်းအား သည် ၁၀၀% ရှိရပါမည် ။ ဖော်ပြပါ အချက် တစ်ချက် လျော့ ပါက ထင်သလောက် မစွမ်း နိုင်ပါ ။ မိမိ ဆောင်ထား သော ပိတုန်းရုပ် သည် မည်သည့်သိဒ္ဓိ မှမရှိ ..
ထုလုပ် ဆောင်ရွက်ပုံ မှာ … လှည်းပတောင်း ပိတောက် သား ကို ပိတုန်း ရုပ်ထု ပိတုန်းဖင် ကို အပေါက်ဖောက် အပေါက် ထဲ ပြဒါး ထည့် ပါ။ ပဒိုင်း အမြစ် နှင့် အပေါက် ကို ပြန်ပိတ်ပါ ။ ပြီး လျှင် ဆေးကတ္တရာ အနက် သုတ်ပါ ။( ရွှေမချရပါ ) ထု့ လုပ်ရမည့် နေ့ မှာ … တနင်္ဂနွေ .. အင်္ဂါ .. စနေ .. ထို သုံးနေ့ တွင် ဆောင်ရွက် စီမံရပါ မည် ။ နက္ခတ် အချိန် အခါ မမှန်ပါက ထင်သလောက်မစွမ်း နိုင်ပါ ။ ပိတုန်း ရုပ် ထု့ လုပ် ရာ အချိန် သည် နှစ်ဘက်ကဏ်း ခါးပါဒ် နက္ခတ် ဝရစုပ် အချိန်အခါ ဖြစ်ရန် အလွန် အရေး ကြီးသည်။
ဤသို့ … ပိတုန်း ရုပ် များ ထုလုပ် ပြီး နောက်ရဟန္တာ သမုပ် ခဲ့သော သိမ် တစ်ခု့ တွင် သိမ် ထဲရှိ ဘုရား ရှေ့ တွင်
ဆွမ်း (၅) ပွဲ
လက်ဖတ် (၅) ပွဲ
ယို (၅) မျိူး
ဘူးသီးကြော် ဘယာကြော် ပဲကြော် ကြက်သွန်ကြော် အာလူးကြော် အကြော် (၅) မျိူး (၃) ခုစီ ထည့် ပါ ။
စံပါယ်ပန်း (၈) ပွင့် နှင်းဆီပန်း (၈) ပွင့် နှင်းပန်း (၈) ခက် ထီးဖြူ (၃) လက် တံခွန် (၃)လက် ဖယောင်းတိုင် (၈) တိုင် ထွန်းဘုရား ကို ကပ်လှု ပူဇော် ၍ လိုအပ်သောဆုတောင်း ရပါမည် ။
ပြီးလျှင် အောက်ပါ ဂါထာ များ နှင့် သိဒ္ဓိ တင်အသက်သွင်း ရပါမည် ။
၁။ ဉုမ် ဣတိပိအရဟံ အဝိညာဏကသြသထံသဝိညာဏကံ သမံ အံ့ အံ့(၁၈) ခေါက် ရွတ်၍အသက်သွင်းရမည်။
၂။ ဉုမ် ဗုဒ္ဓံ သိဒ္ဓိ ဓမ္မံသိဒ္ဓိ သံဃံသိဒ္ဓိ မာတာပိတုသိဒ္ဓိ အာစရိယာသိဒ္ဓိ ဗြဟ္မသိဒ္ဓိ ဒေဝသိဒ္ဓိ ဝိဇ္ဇာဓရသိဒ္ဓိ ယက္ခသိဒ္ဓိ သိဒ္ဓိ အပေါင်း ထောင်သောင်း တည်ပါစေသတည်း ထက်ပါစေသည်း အောင်ပါစေသတည်း။(၁၈) ခေါက် ရွတ်ဖတ် ၍ သိဒ္ဓိ တင်ပါ ။
၃။ ဗုဒ္ဓဂုဏံ ဗုဒ္ဓစက္ကံ ဓမ္မဂုဏံ ဓမ္မစက္ကံ သံဃဂုဏံ သံဃစက္ကံ မာတာပီတုဂုဏံ မာတာပိတစက္ကံ အာစရိယဂုဏံ အာစရိယစက္ကံ သဗ္ဗဂုဏံ နုဘာဝေန သဗ္ဗစက္ကံ နုဘာဝေနတိုက် ဆြာ တိုက် ခိုက် ဆြာ ခိုက် နှိမ် ဆြာနှိမ် ချူပ် ဆြာ ချူပ် စေ ။ ဤ ပိတုန်းစေ ပိတုန်းနှုန်း ဂါထာ နှင့် (၉) ခေါက်ရွတ် ဖတ် ၍ ပိတုန်း ရုပ် ကို နှိုးထား ပါ ။
အရေးအကြောင်း ရှိလျှင် ဤ ပိတုန်းစေ ပိတုန်းအနိုးဂါထာ ကို အနည်းဆုံး (၇) ခေါက် အများဆုံး (၉) ခေါက် .. ရွတ်ဖတ်ပါ ။ မိမိ အား သူများ မကောင်းကြံစည် ၍ မရပေ ။ရန်သူ ကို ပိတုန်း ရုပ် က သိမြင်နိင်ပေသည်။လိုအပ်သလို ခိုင်းစေ ၍ ရသည် ။
အတိုက်ခိုက် မှန်သမျှ ကာကွယ်သည် ။မိမိ နှင့် တသားထဲ ထားပါ ။ အရေးကြောင်းတစုံတခုရှိလျှင် ပိတုန်းရုပ်ကမိမိအားအိမ်မက်ပေးသည်။ အိမ်မက်ထဲတွင် ပိတုန်းရုပ် ကို မြင်တွေ့ရ၏ ။ပိတုန်းရုပ် အား လက်ကိုင်ပုဝါ ထောင့်စွန်း တွင်ထုံးချည် ၍ ဆောင်ထား ရသည် ။ မည်သူ မျှ မတွေ့စေ ရ ။ အိမ် တွင် အစောင့် ထား မည်ဆိုပါကပိတောက်သား အပိုင်း တစ်ခုကို အပေါက်ဖောက်အပေါက်ထဲ ပိတုန်း ထည့် ပြီးလျှင် ပိတောက်သား နှင့် ပြန်ပိတ် မိမိ ၏ အိမ် ခြံ မြေ တွင် မြုပ်ထားရပါ မည် ။ တိုက်ခန်း ဖြစ်ပါက ထိုပိတောက်သား အား ထောင့်တနေရာတွင် မမြင်အောင် ထားရမည်။ထောင့် လေး ထောင့် လေးကောင် မြုပ်ရမည်။ တစ်ကောင် ထား တိုင်း ပိတုန်းစေ ပိတုန်းနှိုး ဂါထာ(၉) ခေါက် ရွတ်ရပါမည် ။
ဤသို့ လျှင် ပိတုန်းရုပ် အာနိသင် ကြီးမား၏ ။ရန်သူမျိူး ၅ ပါး ကာကွယ် ၏ ။သူခိုး ဓားပြ ဘေး အနုကြမ်းစီး ဘေး ကာကွယ်၏ ။ လပြည့်လကွယ် (၁၂) နာရီ တွင် ပိတုန်းအားစပယ် (၈) ပွင့် နှင့် အစာကြွေး ပြီး လရောင်ပြရ၏ ။ အိမ် ကျောင်း ဇရပ် သိမ် စသည်များတွင်၎င်း ခြံ မြေ လယ်ယာ အိမ်ဝင်း ကျောင်းဝင်း စသည်များတွင်လည်း ပိတုန်းရုပ်ကို အစောင့် အနေဖြင့်မြုပ်၍ စီရင်ထားနိုင်ပေသည် ။
ပိတောက်သား အပိုင်း တစ်ပိုင်း ကို ဖြတ်ပါ ။အပေါ်မှနေ၍ လွန် နှင့်ဖောက်ပါ ။ထို အပေါက် ထဲသို့ ပိတုန်းရုပ် ပြန်ထည့်ပါ ။ ပြီး လျှင် ပိတောက်သား နှင့်ပင် ကျပ်နေအောင်စို့ ရိုက်ပြီး ပိတ်ပါ ။ မိမိ ၏ အိမ် ခြံဝင်းခြံလေးထောင့် ( သို့ ) ခြံ ရှစ်ထောင့် တွင် ပိတုန်းရုပ် ထည့်ထားသော ပိတောက်သား ပိုင်း အား မြုပ်ပါ ။ကျောက်လောင်း ပြီး မြုပ်ထားပါက ပိတုန်းရုပ်ထည့် ထားသော ပိတောက်သား သည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာမြေကြီးထဲမပျက်စီးပဲနှင့်ထာဝရတည့်တံ့စေနိုင်ပါသည်။
ပထမ ဦးစွာ အိမ်မှာမြုပ်လျှင်အိမ်၏အလယ်ဗဟိုတွင်ပိတုန်းတစ်ကောင် မြုပ်ရမည်။ပြီး မှ ထောင့်လေးထောင့် တွင် မြုပ်ရပါမည် ။ခြံဝင်း ဖြစ်ပါ လျှင်လည်း အလယ်ဗဟို မြေကြီးတွင်ပထမဆုံး ပိတုန်း တစ်ကောင် စတင်မြုပ်ရပါမည်။တစ်ကောင် မြုပ်တိုင်း မြုပ်တော့မည် ဆိုပါက ပိတုန်းစေ ဂါထာ ပိတုန်းနှိုး ဂါထာ ဖြင့် (၉) ခေါက် ရွတ်ဆိုပြီး မြုပ်ရပါမည် ။ ထိုနည်းတူ လယ်မြေ ယာမြေ များတွင်လည်းထိုနည်း အတိုင်း ပင် ဖြစ်ပေသည် ။
ဤကဲ့သို့ပိတုန်းရုပ်ကိုစီရင်ဆောင်ရွက်ထားသောအိမ်သည်မကောင်းသော (၃၇) မင်းနတ်များနတ်မိစ္ဆာ များ မပူးကပ်ဝံ့ အနှောက်အယှက် မပြုစုန်းကဝေ သရဲတဘက်များ မကပ်နိုင်။ ထို့ပြင်သူခိုးဓားပြအနုကြမ်းသမား များ အန္တရာယ်မပြု့နိုင်ခိုးရန်လာပါက မိမိ အိမ် အား ရှာမတွေ့နိုင်ပေ။ အိမ် ကျောင်း ဇရပ် သိမ် စသည်များတွင်၎င်းခြံ မြေ လယ်ယာ အိမ်ဝင်း ကျောင်းဝင်း စသည်များတွင်လည်း ပိတုန်းရုပ်ကို အစောင့် အနေဖြင့် မြုပ်၍ စီရင်ထားနိုင်ပေသည် ။
မော်လမြိုင်ြမ်ု့နယ်အတွင်းမှမွန်ရွာတစ်ရွာတွင်မိသားစုတစ်စုရှိလေသည် ။ဝိုင်းလုပ်ဝိုင်းစား ဖြစ်သောကြောင့် နှစ်အနဲငယ်ကြာအိမ်ကြီး အိမ်ကောင်း နှင့်စီးပွားတိုးတက်လာသည်။မိသားစု့တွင် လည်း မွေးမြူရေး နှင့် အောင်မြင်လာပေ သည် ။ ဤ တွင် တနှစ်လျှင် ၁ ကြိမ် ၂ ကြိမ် ကျွဲပျောက်နွားပျောက် မည်သူက ခိုး မှန်း မသိ ဖြစ်လေ၏။ညရေးညတာလဲအပြင်မထွက်ရဲ သိသိကြီး နှင့် လက် လွှတ် ကြည့်နေရ၏ ။တစ ထက် တစ သူခိုး များ က အတင့်ရဲလာ၏ ။ထို စဉ် ဝေပုလ္လဆရာတော် ကြီး ထံ ရောက်ရှိ လာ
ဆရာတော် … ” ဟဲ့ .. ဒကာမကြီး တွေမလာစဖူးအလာထူး ပါလား ..? ဘာကိစ္စရှိပါသလဲ..?ရှိခဲ့ရင် လျှောက်တင်စမ်း ဟဲ့ … ”
ဒကာမကြီး …. ” တန်ခိုးကြီးသော ဆရာတော်သိဒ္ဓိကြီးသောဆရာတော် မြို့နယ်အနှံ့ကျော်ကြားနေ၍ဆရာတော်ထံအားကိုးတကြီးရောက်လာကြတာပါ ဘုရား ”
တပည့်တော်မ တို့ဟာ မရှိဆင်းရဲ တဲ့ ဘဝကနေတက်လာတာပါ ဘုရား လူဆိုးသူခိုးတွေကဆိတ်တွေ့ရင်ဆိတ်ခိုးနွားတွေ့နွားခိုးနဲ့တပည့်တော်တို့လဲ ညရေး ညတာအပြင်ဘက် မလိုက်ရဲ တော့ သူတို့ အကြိုက် ဖြစ်နေတာ ဘုရား ။ဒါမို့ အိမ် အား သူခိုး အခိုး မခံရလေအောင် ..
အဆောင် ဖြစ်စေ ယတြာ ဖြစ်စေ စွန့်တော်မူပါဘုရား ..” ဟု့ လျှောက် တင်လေသည်။
ဆရာတော် ….”အေး ..အေး ..ဒါဆိုရင်ပိတုန်းရုပ်ထုထုဟပိတုန်းရုပ်တွေကို အိမ် အလည်ဗဟို မှာအိမ်တိုင် ထဲ တစိကောင်ထည့် အိမ် လေးတိုင်မှာ လွန်နဲ့ ဖောက် အပေါက်ထဲပိတုန်းရုပ် ပြန်ထည့် ပိတ်.. ငါ ကိုယ်တိုင် ဂါထာ စုပ် ပြီးအမိန့် ပြန်ပေး မယ် .. နင်တို့ကသာ ငါ ညွှန်ပြသလိုပိတုန်း ရုပ် တွေ ကိုသာ ခပ်များများ ရအောင် သွား
ထု ကြ ” ထိုသို့ အမိန့်ပေး ပြီး ချက်ချင်းပင် နေ့ကောင်းရက်
မြတ်ရွေး ၍ ပိတုန်းရုပ် စီစဉ်ရလေ၏ ။
ပိတုန်း ရုပ် များ ထဲ ပြဒါး ထည့် ပဒိုင်း မြစ်နှင့် ဆို့ပိတ်ပြီး ဆေးကတ္တရာ အမဲ သုတ်နေလှန်းဆေး သုတ်ထား ရာ ခြောက်သွား မှ ပိတုန်းရုပ်
အား အသက်သွင်း သိဒ္ဓိတင် ၍ ပိတုန်းအနှိုးအစေဂါထာ ထပ်စုပ် မနိး ၍ လိုရာ ကို အမိန့်ပေးပြီးအိမ်တိုင် ကြီးထဲတွင် အပေါက်ဖောက် ပိတုန်းရုပ်များ ကိုထည့် ၍ အသေ ပိတ်လိုကိပါတော့၏။
ခြံ လေးထောင့် တွင် လည်း ပိတုန်း တစ်ကောင်စီထည့် ၍ အမိန့် ပြန်ခဲ့လေသည်။ပိတုန်းရုပ် မြုပ်ပြီး .. နောင် လ အနဲငယ် ကြာသော်
ထို မိသားစု့ သည် ဝမ်းသာအားရ ဖြင့် လာရောက်ကန်တော့ ကြလေသည် ။
ဆရာတော် ….. ” ဟဲ့ … နင်တို့တွေ နေကောင်းကြရဲ့လား ပစ္စည်းတွေ အခိုးခံရသေးလား ဟဲ့ ”
ဒကာမများ …. ” … သူခိုးတွေ လာပြီး ဝန်ချ တောင်း ပန် သွားပါတယ် ဘုရား .. ပိတုန်း မြုပ်ပေးပီးလ အနဲငယ် ကြာ မှာ သူတို့ လာခိုး တဲ့ အခါ သူတို့ဟာ အိမ် ကို လဲ ရှာမတွေ့ခြံလဲ ရှာမတွေ့ပါဘုရား .. ဒီလိုနဲ့ မိုးလင်းသွားတဲ့အခါပြန်ပြေးရတော့တာပေ့ါဘုရား …သူခိုးတွေဟာဘယ်
နှစ်ကြိမ်လောက် လာပြီး ခိုးတာတော့ မသိပါဘုရား .. ခိုးဖို့ လာလိုက် မတွေ့လိုက်နဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ဝန်ချ တောင်းပန်သွားတာပါ ဘုရား ..”
“.. အဒေါ် တို့အိမ် မှ ကျွဲ နွား ပစ္စည်း တွေ ခိုးယူနေတာ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ ပါ .. ဒီအတွက် …ကျနော်တို့ ဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ် … နောင် နောင် ကိုလဲအဒေါ် တို့ အိမ်က ပစ္စည်း တွေ မခိုး တော့ပါ ဘူး။
လို့ သစ္စာ လဲ ပြု့ပါတယ် .. ကတိ လည်း ပေးပါတယ် … ခိုးယူမိတဲ့ အမှား အတွက် လည်း နောင်တရလို့ မဆုံး ပါ ဘူး ..
ဘာ ကြောင့် ဆို တော့ .. အဒေါ် တို့ အိမ် မှာဘာအဆောင် ရှိသလဲ ..?
ဘာတွေလုပ်ထားလဲတော့ ကျနော်တို့ မပြောတက်ပါ ဘူး .. အဒေါ် တို့ အိမ် ကျနော်တို့ ခိုး ဖို့ လာတာ၃ ခါ လောက် ရှိပါပြီ ။ ဒါပေမဲ့ .. ထူးဆန်းတာကနေ့ ခင်း ပိုင်း က အိမိ ကို ဘယ်လို မှတ်ထားပါစေ
ခိုး ဖို့ လာရင် လမ်းမှား အိမ်မှား အိမ်ကို ရှာလို့မတွေ့ပဲ အိမ် ရှာရင်း မိုး လင်း သွားတာနဲ့ပြန်ပြေး ရတော့တာပဲ လို့ . ပြောသွား ပါတယ်
ဤ ကား ဆရာတော် ကြီး အစီအရင် ဖြစ်သောပိတုန်း ရုပ်၏ကိုယ်တွေ့ အား ဆရာတော် မှရေး သား တင်ပြ ခဲ့ ခြင်း ဖြစ်ပေသည် ။
ဆရာတော်၏ ပိတုန်းရုပ် အစီရင်အား မြုပ်နှံအဆောင် အဖြစ်ဆောင်ပြီး နောက် ဖြစ်ရပ်မှန်များစွာ ဆရာတော် တင်ပြ ခဲ့သည် များ ကိုအလျဉ်း သင့်သလို ရေးသား ဖော် ပြ ပေးသွားပါဦးမည် ။
ကျမ်းကိုး ဝေပုလ္လရာမ ဆရာတော်